कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आव २०७५/७६ को पहिलो त्रैमाससम्ममा रू. १ करोड ८८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवको सोही अवधिमा रू. १ करोड ४८ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८१ करोड ६४ लाख रहेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ३७ करोड ९७ लाख छुट्याएको छ ।
साथै, कम्पनीको कात्तिक २० गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ८ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको आगामी व्यावसायिक योजना संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा अभिवृद्धि गर्न शाखा विस्तार एवम् अधिक ग्राहकवर्गको पहँुचमा पुग्ने गरी शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याउने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लगानीमा विविधताका साथ संस्थागत सेवा गुणस्तर साथै मुनाफास्तर दुवै पक्षलाई थप सुदृढ गर्दै लैजाने रहेको छ ।
2018-12-02 - 174 view(s) - abhiyan